zinyaw: လောကသာရပျို့...တတိယပိုင်း ဇင်ယော်ချေတကောင်လီကိုရာအဆန်ပျံသန်းရင်းအမှတ်တရထားခစွာတိရာ... မတော်တဆခလုတ်တိုက်ရင်းရောက်ဟိလာရေလူတိကိုကျေးဇူးတင်ရေ... အချိန်ပီးပနာ ၀င်ကြည့်လားရေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါရေ..စာပီတခုစွာလူမျိုးတမျိုး၏အသက်ဆိုခကေယင်းစာပီစွာလူသားတိုင်း၏အကျိုးကိုရှေ့ရှု့လိမ့်မေလို့ထင်ပါရေ.. ဇင်ယော်
သဇင်ရို့ မြီကဇင်ယော်ချေတကောင်လီဆန်မှာပျံသန်းရင်းနန့် 
KualaLumpur, Ampamg, Malaysia
အကျွန်မဟုတ်ရေအကျွန်စိတ်ကူး ဒေပိုင်ရက္ခိုင်သမိုင်းတချို့ကိုထိမ်း သိမ်းခွင့်ရဟိအောင်ခောတ်အဆက် ယှာဖွေထိမ်းသိမ်းပီးခရေသမိုင်းသု တေသီရို့နန့်ရာဇ၀င်ဆရာကြီးရို့ အားရှိခိုးဦးချပါရေ.... လူသားအားလုံးကိုလေးစားလျှက်. ဇင်ယော်
( ဗုဒ္ဓ၀င်လင်္ကာမှ )
"ကျွန်းတွင်ဇမ္မူ၊လူတွင်ရခိုင်၊ ကြိုင်ဘိသတင်း၊ကင်းသည့်အပြစ်၊ ချစ်သည့်အမျိုး၊ကြိုးသည့်လုံ့လ၊ မြတ်စာဂနှင့်၊နှစ်ဝနတ်လူ၊ချစ်ကြည်ဖြူသည်၊ နိဗ္ဗူဆုတောင်းပြည့်အံ့တည်း"
အမျိုးသီလ၊နှစ်ဌာနကို၊ ပြည့်ဝမဏ္ဍိုင်စောင့်စွမ်းနိုင်၍၊ ရခိုင်နာမဘွဲ့မည်လှဖြင့်၊ အနွတ္တသညာ၊ခေါ်အပ်ရာတည်း (အသျှင်နာဂိန္ဒမော်ကွန်း)
လိမ္မာပြင်းပြင်းဆင်းရဲအားရ ကြွယ်ဝမနာလိုကိုယ့်သာမကြိုက် အမိုက်တရားဤလေးပါးကြောင့် ရခိုင်သားမှာဆင်းရဲလာမည် (မြောက်ဦးနတ်သမီးသိုက်)
The KingDom Of Ancient Arakan
Kyauk Pyu (1)
Learnning for Language
Fujitsu Driver Free Software
For Computer Free Software
The English Language References
The Land Of Arakan
SHAVING CREAM Amigafx casino paysafecard Online Casino Australia Shoutbox widget
A R R C (Malaysia)
Free4Rakhaing
Arakan Soical Net
A D G (အဘုချေ)
ရိုးမ ၃ သတင်းဌာန
ဗွီဒီယိုMP4 သို့ ပြောင်းနိုင်ပါရေ
(၄ဂ)မှတ်ကြကုန်လော ၊ ဗြဟ္မာ့နွယ်ဖွား၊ ပုဏ္ဏားမျိုးရို့၊ ကောင်းကျိုးစကား၊ ငါလျှင်ကြားစိမ့်၊ ရှိဖျားကမ္ဘာ၊ မစစွာက၊ ဗြဟ္မာပိုင်းခြား၊ ဆီးသမားနှင့်၊ဟူရားကြယ်မြင်၊ ကောင်းကင်နတ်သတ်၊ တတ်သည်တချို့၊ မီးပူဇော်သို့၊ ဖြော်ဖြော်မတ်ရွတ်၊ ဂြိုဟ်နတ်သန္တီး၊ ဦးဆီးတခြား၊ ခေါင်အားဗေဒင်၊ သိမြင်နှံ့စပ်၊ မေးကပ်ကပ်နှင့်၊ ကလာပ်ဗျဦ္စ၊ ဒဏ္ဍီဝိဒဂ်၊ကျမ်းခတ်ဗျာကရိုဏ်း၊ တတ်နိုင်တခြား၊ ဤလေးပါးကို၊ ပုဏ္ဏားရို့တွင်၊ မချို့ကျေးဇူး၊ အထူးသမိုက်၊ မျိုးလိုက်မှတ်သား၊ ဆီးသမားလည်း ၊ ဆီးဝါးတတ်ပွန်၊ ဆီးကြမ်းလေ့ကျွမ်း၊ ဗိန္ဓောပြွမ်း၍ ၊ဆီးကျမ်းထိုထို၊ သာရကိုလည်း၊ ဖွင့်ဆိုတတ်ကျယ် ၊ ဓိပ္ပါယ်အနက်၊ လွန်လေ့ကျက်၍ ၊ ဓါတ်ပျက်သည်းချေ၊ သွီးလီချောက်ယှား၊ သလိပ်များက ၊စသည်ရောဂါ ၊ အနာတမျိုး ၊ ကိုးဆယ်ခြောက်ပါး ၊ အပြားပြားကို ၊ မမှားလတ်အောင် ၊ ကုသဆောင်၍ ၊ အခေါင်သမားမြောက်စီမင်း ၊၊
ဟောရဂန္တ၊ ဂဏနဟု ၊ သိပ္ပဟူးရာ၊ တတ်မြောက်မြား၍ ၊ပုဏ္ဏားနွယ်ရိုး၊သူကောင်းမျိုးရို့၊ ကြိုးကြိုးကုတ်ကုတ် ၊ အားအင်ထုတ်၍ ၊အဟုတ်လေ့လ ၊ ပရိစ္စဖြင့် ၊ကြားကသိတတ် ၊ဗြို့ဟဇ်ရာဇမတ္တဏ် ၊ ကိန်းဆန်ဓူပန်း ၊ ဂြိုဟ်သွမ်းခွဲခြင်း ၊ထုတ်နိုင်စွဲအား ၊ စုံစမ်းစိရိ ၊ များထွေမဏ္ဍပ်၊ ထပ်ကြပ်ရောဂါ ၊ကာလစက္ကိ ၊အမြိတစုတ် ၊ဖော်ထုတ်ဓာတ်ကျမ်း ၊ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ၊တတ်လေ့လာ၍ ၊သတ္တဗီသ ၊လှည့်ထနက္ခတ် ၊မြင်းမိုရ်ပတ်သား ၊ဒွါဒသိရာသီ ၊ယာယီစက်ကွင်း ၊ဂြိုဟ်နင်းဂြိုဟ်ပြောင်း ၊ကောင်းမကောင်းသား ၊ကျိုးကြောင်းဆုံးဖြတ် ၊ နီလကြတ် နှင့် ၊ ဥပဒ်အာယု ၊စဉ်းမှုတတ်ပွန် ၊စက်အဟန်သို့ ၊ ထုံမွန်ကားကား ၊ အသားအရိုး ၊ စုပြည့်ဖြိုးလျှက် ၊ဟိုးဟိုးထင်သိ ၊ပ ညာဟိဟု ၊ကိတ္တိထင်ယှား ၊ဗြဟ္မာသားရို့ ၊ဟူးရားတတ်ခေါင်မြတ်စီမင်း ။
သာမယဇု ၊ ဣသျှုဗေဒင်၊ သုံးပုံမြင်၍ ၊ သန့်စင်သီလ၊ အာစာရနှင့်၊ မိဘမျိုးစစ် ၊အဖြစ်မြတ်လှ ၊ဗြဟ္မာဏဟု၊ တွင်ထမည်သာ ၊အင်္ဂါသုံးမည် ၊ကျေးဇူးတည်လျှက် ၊ရွာပြည်တိုင်းကား ၊လှည့်ပတ်သွား၍ ၊ထုံးသားမှန်ကူ ၊ခရုဖြူနှင့် ၊ပစ္စူပတ်လဲ ၊လက်ဘယ်ပတ်ခြုံ ၊စပယ်ရုံလျှက် ၊တင်တုံစလွယ်၊ လိုင်မှာမကင်း ၊ခရုသင်းနှင့် ၊အလင်းရသည် ၊ပတ်စည်ကျစ်ကျစ်၊ ဦးရစ်ပေါင်းထုပ် ၊နောက်ဆံအုပ်နှင့် ၊တုန်လှုပ်မဲ့လျှင်း ၊ပွဲလည်ကျင်း ၍ ၊စိုးမင်းရို့ရို့ ၊မရွိမတ်မတ်၊ ဖောင်ဖောင်ရွတ်လျှက် ၊စိမ်းလတ်မြသွင် ၊နီစာပင်နှင့် ၊ရီစင်ကမ်းမှတ်၊ ကျင့်မြဲဝတ်ဖြင့် ၊သူမြတ်ရို့ထံ ၊အလှူခံလော့ ၊ခြိုးခြံသိပ်သည်း ၊ဥစ္စာဆည်းလျှက် ၊ပစ္စည်းပေါယယ် ၊ဗြဟ္မာကြွယ်ဟု ၊လူဝယ်သတင်းပေါက်စီမင်း။
ဥဒည်းမဇျွင် ၊နီဝင်အခါ ၊ ညစာသုံးပါး ၊ ပိုင်းခြားဂါထာ၊ ရွတ်မြဲရာသား ၊ကာယသိဒ္ဓိ ၊တစိသညာ ၊ တတ်လေ့လာလျှက် ၊ ကြောင်းခြာခွဲစိတ် ၊ ပရမိသွား ၊မဟာပိန္နဲ ၊ ဘေးလွှဲရန်ဖီ ၊နတ်စန္စီကို ၊ပန်းနီပန်းဖြူ ၊ ပူဇော်မူလျှက် ၊ဆုယူဆုတောင်း ၊ ကျင့်လမ်းဟောင်းဖြင့် ၊ ဦးခေါင်းသန္တီး ၊နိတိုင်းဆီးလျှက် ၊လုပ်ကျွေးမှု့ဆောင် ၊ ထဲချောင်းတိုက်တွင်း ၊ထမင်းချက်ပြုတ် ၊ ငရုပ်ချင်းဆား ၊ဆီပြားသကာ ၊ ဃနာထောပတ် ၊ ကြံပွတ်နှမ်းပဲ ၊စားစမြဲဖြင့် ၊အမဲအသား ၊သားငါးယှောင်ကြဉ် ၊မယှဉ်သက်သတ် ၊အကျင့်လေ့လ ၊စာရိတ္တဖြင့် ၊မိဘစုတိ ၊ခုနစ်နိလျှင် ၊စိလတ်သောအခါ ၊မကွာဆောက်တည် ၊ ကိုယ်စားရည်၍၊ စိတ်ကြည်မြတ်လည်း ၊ အလှူပီးလော့ ၊ရှီးကလွန်လီ ၊ရှိရိုးပီးသား ၊မျိုးဆွီကျင့်မြဲ ၊မှတ်သုံးစွဲလျှက် ၊ငရဲမသတ် ၊ခန္တာပျက်လည်း ၊အထက်နတ်ပြည်ရောက်စီမင်း ။
ဂြဟသန္တိ၊ကျမ်းနှင့်ညို၍ ၊ ဗလိပူဇော် ၊ဂြိုဟ်ခေါ်ဂြိုဟ်နှင် ၊ဗေဒင်ရွတ်မန်း ၊မန္တန်တန်းလျှက် ၊ကျယ်ဝန်းစက္က ၊မဏ္ဍလဟု ၊ တရာ့သျှစ်ကွင်း ၊အင်းလည်းစီရင် ၊ ဆင်သားဗိတာန် ၊ တံခွန်တလျှောက် ၊ ဖြူနီဆောက်၍ ၊ ပယ်ဖျောက်ရန်ဘေး ၊ ဆီးပီးဦးခေါင်း ၊ဘိသက်လောင်း၍ ၊သူကောင်းသူ့မြတ် ၊ လွတ်စီအနာ ၊ဥ ပါဒ်ခွာလော့ ၊ပြည်ရွာစီးပွား ၊ များစိမ့်သမူ ၊ ဟုတ်တိုင်းပြု၍ ၊စုဘိကျီးခဲ ၊ရဲရဲမီးတွင်း ၊လောင်ခြင်းဖြောက်ဖြောက် ၊ ပေါက်ပေါက်စသည် ၊ပန်းငါးမည်ဖြင့် ၊ ဆောက်တည်မပျက် ၊ ခုနစ်ရက်လျှင် ၊ခန့်တွက်ပိုင်းခြား ၊မန္တရားတည့် ၊ ဖန်များစုရွတ် ၊ပျားထောပတ်နှင့် ၊မီးနတ်ကော်ရော်၊ ယစ်ပူဇော်၍ ၊လူဘော်ရန်စစ်ပျောက်စီမင်း ။
ကျေးဇူးပညာ ၊များစွာဂုဏ်အင် ၊ဗေဒင်တတ်သိ ၊ ပညာဟိဟု ၊က၀ိပုဏ္ဏား ၊အများသမိုက် ၊သင်္သကရိုက်ကို ၊မျြိမြှိုက်လျှာဖျား ၊ စက်ထားရဟတ် ၊ပိဋကတ်သွင်သွင် ၊နှုတ်သံလွင်နှင့် ၊ပီပြင်မှုတ်မန်း ၊ဖြိုးဖြိုးဖြန်းလျှက် ၊ ကျင့်ခန်းထွေပြား ၊အပါးပါးတည့် ၊ မှတ်သားကျယ်ဝန်း ၊ဆန်းအလင်္ကာ ၊ နားဝင်စွာ၍ ၊ဂါထာဖွဲ့စွမ်း ၊ချီးမွမ်း စလောက် ၊မင်းပွဲမှောက်တွင် ၊တယောက်ပဏ္ဍိတ် ၊ပုရောဟိတ်ဟု ၊ဘိသိတ်ဆရာ ၊ မြောက်ထိုက်စွာလျှက် ၊ဒိသာပါမုခ် ၊ မည်ထုတ်ကျော်အောင် ၊ကြိုးပမ်းဆောင်၍ ၊ တတ်ခေါင်လိမ္မာ ၊ရှိအခါ၌ ၊ဆရာမြောက်လှ ၊ဇနက္ကသို့၊လုံ့လကြိုးစား ၊မင်းရို့အားကို ၊စီးပွားရောက်အောင် ၊ကျေးဇူးရောင်ဖြင့် ၊လူ့ဘောင်ထွန်းလင်းတောက်စီမင်း ။
လက္ခာဏာကြန် ၊တတ်ပွန်လေ့လာ ၊ မင်းဖြစ်ရာသား ၊လက်ညာဖ၀ါး ၊အခြားပျက်ပျက် ၊ခြီထက်သက်၍ ၊လက်သည်းများသွင် ၊အရေးမြင်မူ ၊ မင်းလျှင်စစ်စစ် ၊ဖြစ်အံ့အမြဲ ၊မချွတ်လွဲဟူဟု ၊၀မ်းထဲမရွံ ၊လိုင်ဖြတ်ခံလော့ ၊ထုံးစံမှတ်သား ၊နည်းနာများကို ၊ပုဏ္ဏားမျိုးကောင်း ၊ လူအပေါင်းတွင် ၊ ကဲဆောင်းတတ်လွန် ၊ကောဏ္ဍဉ်းဟန်သို့ ၊ဟောညွန်လက္ခာဏာ ၊တတ်လှစွာ၍၊ ပညာကဝေ ၊ မြောက်သောထွေဖြင့် ၊အသေအချာ ၊နာနာသိပ္ပ၊ ကိစ္စတတ်ပွန် ၊မန္တန်ပြီးစီး ၊နတ်ကြီးသူရဿတီ ၊ပင့်ချီခေါ်ချ ၊စကားရလျှက် ၊ပေါက်ပြကျော်ထိတ် ၊ ပုရောဟိတ်ဟု ၊ဘိသိတ်ဆရာမြောက်စီမင်း ၊၊
ကျယ်ဝန်းစင်္ကြ၀ဠာ ၊ကမ္ဘာတည်စ ၊ပေါ်ဦးကလျှင် ၊ ဗြဟ္မာနွယ်ရိုး ၊ ကျော်ဟိုးဟိုးတည့် ၊ ကောင်းကျိုးစင်ကြယ်၊ လေးသွယ်ဗေဒင် ၊တတ်ပီးစင်သား ၊လူတွင်ထင်ယှား ၊ ပုဏ္ဏားများကို ၊ကျင်စီလို၍ ၊သံချိုလင်္ကာ ၊ထုံးပမာဖြင့် ၊နည်းနာထွေပြား ၊မှတ်စိမ့်ကြားသည် ၊တခြားတတိယပိုင်းတည်း ။ .....။
ရခိုင်သူမြတ်၏လောကသာရပျို့ဆုံးမစာ ပီပုရပုတ်၁၃ ရွက်ဟိကြောင်းသိရှိရပါရေ၊
သက္ကရာဇ် ၁၂၉၃ ခုကဆုန်လတွင်ဟံသာဝတီပဋိကတ်ပုံနှိပ်တိုက် ..(ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်းကို).
Posted by zinyaw at 4:26 PM
မဟာမြတ်မုနိဂါထာတော် မဟာမုနိ၊မဟာပုညော မဟာတေဇော၊မဟိဒ္ဓိကော မယှံဒီပေါ၊မယှံနာထော မယှံဒေတု၊မဟာဇယော၊၊ ရောက်လာဆွီမျိုးမိတ်သဟာ ပျော်ရွှင်ကတ်ပါစီဆိုပနာဆုတောင်းပီးပါရ်ေလီဆန်မှာပျံနိန်ရရေဇင်ယော်ချေ
Go Back To Our Buddhist Land)
မှားယွင်းမှု့ တိကအကျွန်၏ညံ့ဖျင်းမှု့ တိရာဖြစ်ပါရေ....